« Terre rare » any Ambanja : « Hamotika ny tsiron’ny tany ny akora simika », hoy ny Collectif Tany (NewsMada) | AEMW
« Terre rare » any Ambanja : « Hamotika ny tsiron’ny tany ny akora simika », hoy ny Collectif Tany (NewsMada)
Harena an-kibon’ny tany trandrahin’ny vahiny eto Madagasikara koa ny “terre rare”. Araka ny antontam-baovao avy any amin’ny fikambanana Collectif Tany, ho potika sy ho fongana tanteraka ny zavamaniry sy ny tsiron’ny tany, vokatry ny fampiasana akora simika hanivanana ny “terre rare”, toy ny efa hita tany Sina.
Manaitra ny sain’ny besinimaro ny fikambanana fiarahamonim-pirenena Collectif Tany amin’ny fitrandrahana “terre rare” ataon’ny orinasa vahiny any Ampasindava Ambanja, faritra Diana sy Sofia, any avaratra andrefan’i Madagasikara. Hitrandraka ity harena ambanin’ny tany ity amin’ny velaran-tany 300 km2 ny orinasa vahiny Tantalum Rare Earth Malagasy (TREM), nomena fahazoan-dalana hikaroka ny taona 2003. Nahazo fahazoan-dalana hitrandraka izy ny taona 2012, saingy notoherin’ny filankevitry ny Firenena Mikambana mikasika ny zon’olombelona satria nanome azy ny fitondrana Tetezamita teto amintsika. Nohavaozina ny janoary 2015 ny fahazoan-dalana andrana amin’ny fitrandrahana (exploration), manankery mandritra ny telo taona. Namidiny tamin’ny orinasa Apphia minerals SOF PTE Ltd, manana foibe any Singapour, ny ampahan’ny renivolany, ny febroary 2016.
“Terre rare” 1 t/tanimanga 100.000 t
Ahazoana ny “terre rare” ny 0,08% amin’ny tanimanga. Fomba hanivanana azy ny fampiasana tsiranoka simika “chlorure de sodium” na “sulfate d’ammonium” any anaty tanimanga ampolony metatra any ambanin’ny tany. Araka ny zava-nisy tany atsimon’i Sina anefa, namotika ny zavamananaina rehetra io fomba fanivanana ny “terre rare” io, satria vonoin’ireo akora simika avokoa ny zavamaniry rehetra aty ambon’ny tany, ho simba ny tsiron’ny tany, voakasik’ilay akora koa ny rano rehetra.
Raha ny any Ampasindava, mila tanimanga 100.000 t vao hahazo “terre rare” 1 t. Mandritra ny 40 hatramin’ny 50 taona anefa ny fitrandrahan’ny orinasa TREM any an-toerana, ka tombanana hatrany amin’ny tanimanga 1 miliara t ny halain’izy ireo. Vokany, ho faty sy ho potika ny zavamaniry (anisan’ny maro ny tsy fahita raha tsy any amin’iny faritra iny), ny fambolen’ny tantsaha (voly an-tanety sy tanimbary), ny rano fisotro ary ho potika hatrany amin’ny toeram-ponenana mihitsy aza.
Hiantraika amin’ny renirano sy ny rano fisotro
Araka ny lahatsoratra navoakan’ny gazety boky siantifika Environmental Research, “hanome rano 1.000 t voapoizin’ny sulfate d’ammonium sy akora vy mavesatra, sy fako simika 2.000 t ny famokarana “terre rare” 1 t”. Maminavina hanondrana “terre rare” 10.000 t isan-taona ny orianasa TREM, ato anatin’ny telo taona. Hahatratra 10 tapitrisa t, araka izany, ny rano voapoizina ary 20 tapitrisa t ny fako simika isan-taona.
Ho an’ny Collectif Tany, hanampy trotraka ny habetsahan’ny rano hampiasain’ny orinasa mpitrandraka. Mipoitra avy ao anatin’ny alan’Ambongomirahavavy ny loharano ipoiran’ny renirano efatra mandalo any Ampasindava. Koa, tsy ho azo antoka mihitsy ny tsy hiantraikan’ny akora simika avy amin’ny fitrandrahana “terre rare” any amin’ny rano fisotron’ny mponina sy ny famboleny ary ny fiainan’ny zavamaniry.
← Toamasina : 370 tapitrisa dolara hanitarana ny seranan-tsambo (NewsMada)
Volamena any Vohilava : naaton’ny faritra ny fitrandrahan’ny sinoa (NewsMada) →